Wax cunista seddexda xilli ma dhaqan lala qabsadaybaa mise jirkeenna ayaa u baahan? – Bulsho News
Wax cunista seddexda xilli ma dhaqan lala qabsadaybaa mise jirkeenna...
Wax cunista seddexda xilli ma dhaqan lala qabsadaybaa mise jirkeenna ayaa u baahan?
Cuntadu ma aha oo keli wax ay dadku si maalinla ah u cunaan oo uu jirku u baahan yahay, waxayna cuntadu muhiimad u leedahay munaasabadaha kala duwan ee ay dadku isugu yimaaddaan sida Aroosyada, Ciidaha, Dhalashooyinka.
Waxtarka jireed iyo midka maskaxeed ee ay cuntady qofka u leedahay ka sokoow waxay kaalin mug leh ku leedahay xiriirka bulshada dhexdeeda ka dhaxeeya.
Ujeeddooyinka ugu muhiimsan ee aan cuntooyinka si maalinla ah ugu cunnana waxay kala yihiin inuu jirkeenna tamar iyo xoog inuu ka helo, isl-markaana cuntadu ay xoojiso awoodda difaaca jirka.
‘Qofka waxa uu cuno ayaa ka muuqda’
Qofka howl maalmeedkiisa si firfircooni leh si uu ugu qabto cudurradana uu isaga difaaco waa inuu cunaa cunta ku filan. Waxaana la isweydiin karaa cuntooyinka isku dheelli tiran ee aan u baahannahay inaan cunno waa kuwee?
Cunnooyinka isku dheelli tiran oo noocya kala duwan ka koobmo waxay jirka ka caawineysaa inuu cunnooyinkaasi kala duwan uu ka helo tamarti ama nafaqadi uu u baahnaa.
“Khubarada cilmi baarista ku sameeyey liiska cunnooyinka isku dheelli tiran ee ay soo saaraan wey ku kala duwanaan karaan balse waxay ka siman yihiin in cuntada aan cuneyno ay dhowr nooc ka koobnaato maadaamaa cunta kasta macdin iyo wax ay la gaar tahay ay leedahay,” ayuu yiri Dr Qaleab Baaye oo Sayniska Cunooyinka ku takhasusay oo wax ka dhiga Jaamacadda Addis Ababa.
“Markasta oo ay bataan noocyada cuntada aan isticmaalno waxaa badanaya fursadda aan ku heli karno cunto isku dheelli tiran oo jirkeenna wax u tarta.”
“Qofka waxa uu cuno ayaa jirkiisa ka muuqdo. Jirkeennana inuu u noqda mid caafimaad qaba wuxuu u baahan yahay ugu yaraan 53 nooc oo macdin ama fiitaminno ah” ayuu yiri Dr Yihune Ayele oo wax ka dhiga Jaamacadda Dillaa.
“Dunida lagama helo cunto ay macdinta iyo fiitaaminnada jirka uu u baahan yahay oo dhan ay u dhammeystiran yihiin marka inta karaankeenna ah waa inaan cunnoyinkeenna aan ka dhignaa kuwa isku dheelli tiran.”
Xigashada Sawirka, Rick Madonik
Dr Yihune cuntooyinka nafaqada leh uu ku talinayo iney dadku cunaan balse ay badsan waxaa ka mid hilib khudaar kala duwan lagu dhex kariyey ama khudaar cagaaran oo la socota iyada oo saliidda ama dufankana aad loogu yareynayo.
Wuxuuna intaa ku daray Hilibka in laga helo 70% maaddada Iron, halka khudaartana laga helo 17%.
Khudaarta, dheefta xoolaha, haruurka kala duwan, miraha kala duwan ee dufanka leh cuntooyinka laga sameeyo ama ay la socdaan ayaa ka mid ah cuntooyinka ugu nafaqada badan.
Waxayna cuntooyinkaasi ay ka mid yihiin 10-ka cunto ee ay hay’adaha WHO iyo FAO ay ku dareen liiska cuntooyinka caafimaadka jirka ugu wanaagsan.
‘Qofka oo cunto ka dhargo ama maalinta seddex jeer cuno kama dhigno inuu qofka nafaqadi uu jirkiisa uu u baahnaa uu helay,” ayuu yiri Dr Masresha Tesema oo ka tirsan machadka caafimaadka iyo cunnada ee dalka Itoobiya.
WHO waxay ku talisay 10-ka cunto ee ku jira liiska cuntooyinka nafaqada leh ugu yaraan 5 ka mid ah inaan 24-ki saaca aan cunno.
Cuntooyinka caafimaadka jirka u wanaagsan ee ay khubaradu ku talinayaan inaan cunno waxaa ka mid ah khudaarta cagaaran, sida salarka, ansalaatada, kaarootka, yaanyada, digirta, ukunta, kalluunka, digaagga, hilibka. Cuntooyinka Karbohaydratka laga helo sida Bariiska, Baastada iyo Burka.
Qofkuna waa inuu marweliba maanka ku hayaa cuntooyinka uu cunayo iney yihiin kuwa uu ka helayo Portien, iyo Tamarta.
Xigashada Sawirka, REDA&CO
“Daraasaad dhawaan la sameeyeyna waxaa lagu ogaaday dadka cuntada meel ku wada cuno iney waxtar aad u weyn qofka u leedahay, iyada oo daraasaddu ay ka digtay qofka oo si boobsiis ah cunto u cuno ay caafimaadka u wanaagsaneen,” ayuu yiri Dr Qalab.
Haddaba maalinti intee jeer ayaa habboon inaan wax cunno?
Arrinta ku saabsan inta jeer uu maalinti qofku wax cuni karo waxaa ka taagan dood. Hase yeeshee, khubaro cunnooyinka ku takhasusay oo BBC u warramay waxay sheegeen inuu qofku maalinti seddex jeer wax cuno iney muhiimad badan laheen. Balse muhiimaddu ay tahay inuu jirkeenna nafqada uu 24-ka saac uu u baahnaa uu helo.
Arrinta ku saabsan inta jeer uu maalinti qofka wax cuni karana waxay la xiriirtaa qofka caafimaadkiisa iyo da’diisa. Carruurtase maalintii inta ay doonaan wax wey cuni karaa maadaamaa jirkooda uu soo korayo balse iyaga laftooda cuntooyinka aan siinno waa iney yihiin kuwa nafaqo leh oo caafimaadkooda bilaya.
Xigashada Sawirka, KucherAV
Waxayna khubaradu hoosta ka xarriiqeen dhaqanka cunta cunka seddexda wakhti ee Qureecda, Qadada iyo Cashada iney tahay arrin ay dadku iskala qabsadeen oo ay jirin wax ku wajibinaya qofka inuu maalinti seddex jeer wax cuno.
“Cuntooyinka jirka uu u baahan yahay waa inaa si maalinla ah u qaadanno, waxaana wanaagsan markasta oo aan gaajo dareenno inaan gaajada jirka ka bi’inno oo aan dhayalsan,” ayuu yiri Dr Masresha.
Ugu dambeyntina qofka cuntada uu 24-ka soconayo nooca ay tahay iyo inta jeer uu cunayaba waxay ku xiran tahay nooca shaqada uu maalinti qabto iyo awoodda dhaqaale uu qofku u leeyahay inuu helo cuntooyin kala nooc ah oo iisu dheelli tiran.